Ikhaya » Iinkonzo zeendaba zeWire » Ukuthatha umdlalo ohlekisayo kwi-Notch kwi-Instagram
Ukuthatha umdlalo ohlekisayo kwi-Notch kwi-Instagram
ULouis Plummer, umyili weNgcebisoFromLouis.
Ndizuze abalandeli abangama-7,000 kwisithuba seentsuku ezilishumi kwi-Instagram, kwaye andikaze ndibheke ngasemva. ”
Umboniso wendoda enye uchazwe ngokutsha, iAdviceFromLouis "Zithini iikati zangaphandle ezicingayo ngeekati zangaphakathi" ividiyo ibethe ngaphezulu kwe-500k ye-Instagram yokujonga kunye ne-50k yokuthandwa. Ingqondo yomntu ohlekisayo uLouis Plummer, iposti yentsholongwane kukudlula ngasemva kwinqanaba leekati ezimbini; umntu uzonwabisile, kwaye omnye uya brruer. Iposi ibhaliwe, yaveliswa, yenziwa, yafotwa, kwaye yahlelwa yinkwenkwezi ngokupheleleyo ukuzisa uhlobo olutsha lomdlalo kwi-zeitgeist. Ukudlala onke amalungu nokufumana konke ukuhleka, lo mntu uneminyaka engama-24 ubudala owayesakuba nguMarine uye waziphosa kwindawo yolonwabo efanele abantu. IngcebisoKusuka kubalandeli bakaLouis bathi iividiyo zenza ukuba iintsuku zabo zibengcono. Yenza umntu acinge, "Yintoni enokuba 'ngcono' kunoko?”
UPlummer uthe, “Ndihlala ndinengqondo enobuchule bokuyila, ke amajelo eendaba ezentlalo yeyona nto ndiyifunayo. Xa ndonzakala kwiMarine Corps, ndaya kwintengiso, kodwa i-COVID-19 yatshintsha yonke into. Ukuchitha ixesha ekhaya, ndikhuthazwe ngabanye abahlekisi kwimidiya yoluntu abenza imveliso yabo. Ke, ndiye ndaqala ukuchitha ngaphezulu kweeyure ezilishumi elinambini ndihlela iividiyo zam, kwaye ihlawulwe. Ndizuze abalandeli abangama-7,000 kwisithuba seentsuku ezilishumi kwi-Instagram, kwaye andikaze ndibheke ngasemva. ”
Ukujonga ividiyo kwi-Instagram, ndwendwela https://www.instagram.com/p/CI7PwwTlbDa/.
Yenziwe nguLouis Plummer, iAdviceFromLouis ngumjelo olandelwa kakhulu kumajelo eendaba ezentlalo.